Nhau - PVC Foam Sheet Musika: Sumo
•PVC furo machira anoumbwa ne polyvinyl chloride. Petrolium zvigadzirwa, resini, uye inorganic makemikari anoshandiswa mukugadzira aya machira. Munzvimbo inodzorwa, inoyerera mvura inowedzerwa kuti ibudise mapepa emupepa ePVC. Izvi zvinoburitsa misiyano dzakasiyana dzekupenga kwekupupa.
•Zvakanakira PVC pombi mapepa anosanganisira kupisa kuramba, kupisa ngura, kupisa moto, nyore kuumba uye kupenda, uye yakasimba simba uye mukurumari
•Aya mapepa emafuro akareruka, akamanikidzwa uye akasungwa zvine hukama nemaminiti uye itsvo. Aya machira anoshandiswa mumadziro ekufukidza, zvemukati kana zvekunze kushongedza fenicha kugadzira, zvikamu, kuratidza mabhodhi, ekuratidzira mabhodhi, pop-up kuratidzira, hoardings, windows, sirin'i dzenhema, uye indasitiri yekuvaka.
•PVC furo machira anoshandiswa seimwe nzira yemapuranga machira ekugadzira madhoo, fanicha, ekushambadzira ekunze mabhodhi, masherufu, nezvimwewo. Aya machira ari kuramba achishandiswa mukushandisa kwakasiyana siyana nekuda kwekusimudzira kwavo zvivakwa zvemuviri, kufanana, uye kubwinya kukuru uye kupenya.
Simuka Mukuda Kwekusingaperi & Yakaderera Mutengo Zvivakwa Zvekushandisa kuDhiraivha Global PVC Foam Sheet musika
•Musika wepasi rose wePVC pepa musika unofambiswa nekukwira kwekudiwa kwemashizha mune akasiyana maficha, kusanganisira kuvaka, mota, uye kurongedza. Inopawo yakanakisa kupisa & kupisa moto uye gasi chipinganidzo zvivakwa, zvinoita kuti chive chinhu chakanakira kushandiswa mumota, bhazi, kana chitima siringi kugadzira.
•PVC furo machira anorwisa-kuora, kuvhundutsa humbowo, uye isiri-chepfu kune vanhu vane yakanakisa kudzivirira moto, utsi-chiratidzo, uye UV-kudzivirira zvivakwa. Ivo zvakare vanopa rakanakisa simba nekusimba, uye vane yakagadzikana makemikari uye yakaderera mvura yekumwa zvivakwa. Naizvozvo, machira ePVC anoshandiswa zvakanyanya mukuvaka uye zvekuvaka, zvekufambisa, uye zvegungwa.
•Kuwedzera kwekudiwa kwemutengo unovaka zvekuvakisa munyika dzichiri kusimukira zvinogona kusimudzira kudiwa kwePVC mafupa mapepa. PVC furo jira-rakavakirwa zvekuvakisa zviri kutsiva zvimwe zvakajairika zvinhu, senge huni, kongiri, ivhu, uye simbi.
•Izvi zvigadzirwa zviri nyore kuisa, zvinopesana nemamiriro ekunze, zvisingadhuri, zvisingaremi, uye zvinopa zvakanakira zvakasiyana pane zvakajairika zvinhu
•Kukwira mumitemo kudzikisa kushandiswa kwesimba muzvivakwa kunofungidzirwa kusimudzira kudiwa kwemashizha ePVC emafafitera panguva yekufungidzira. Pamusoro pezvo, kuwedzera kwenhamba yezvivakwa zvakachengetedza kunofungidzirwa kutyaira iyo PVC furo musika muAsia Pacific.
•Mitengo yezvinhu zvisina kugadzirwa mbichana, kudzikira kwehupfumi, uye nemitemo yakaoma yehurumende inogona kukanganisa kukura kwepasireti yePVC furo